पुलिसको नाकैमुनि खुलेआम धन्दा, यस्तो छ रातको रत्नपार्क - Everest Dainik - News from Nepal
पुलिसको नाकैमुनि खुलेआम धन्दा, यस्तो छ रातको रत्नपार्क
काठमाडौं । रत्नपार्क राजधानीको मुटु हो । यहाँ अफिस टाइम तथा साँझको समयमा मानिसहरुको बाक्लै रुपमा हिँडडुल गर्छन् । फुटपाथमा साना पसल थाप्नेदेखि घर फर्कन गाडी कुर्नेहरुको लाम पनि रत्नपार्कमा देखिन्छ । केही वर्षअघि अहिले सञ्जालमा लोकप्रिय मुकुन्द घिमिरे उर्फ ‘मुकुन्दे’ले रत्नपार्कलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका थिए । उनी रुखमा बसेर भाषण गर्थे ।
उनको भाषण सुन्ने मानिसहरुको भिड नै लाग्थ्यो त्यहाँ । तर, अहिले पाँचसात वर्षअघिको रत्नपार्क छैन । फेरिएको छ । जादु देखाउनेदेखि आवाज दिएर आफ्नो सामान बिकाउनहरु साइड लागेका छन् । रत्नपार्क व्यवस्थित भएको छ । तर, ठ्याक्कै बाहिरको अवस्था भने घिन लाग्दो छ । साँझ ६ बजेदेखि रत्नपार्कको बारमा अढेस लगाएर यौनकर्मीहरु रंगीन रात सुम्पन मोल गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् ।
रत्नपार्कका तीन दृष्य :
१. बारमा अडेस लगाएर बसेकी एक यौनकर्मीलाई वरिपरी उभिएर एउटा झुण्डले हेरेको धेरैबेर भएको थियो । उनले पनि केही हाउभाउ गरिरहेकी थिइन् । लामो कपाल पालेको, अझ ठाउँठाउँमा रातो हालेको, कानमा मुन्द्रा लगाएका भर्खरका केटा उनी नजिकै पुगे ।
केटो बोल्यो : कति ?
हजारमा हुन्नँ ?
१२ सय नभई जान्नँ ।
उनीहरुले गरेको बार्गेनिङ सडकसम्मै सुनिएको थियो । उनी १२ मा गइन् ।
२. रातो पल्सरले वीर अस्पतालको अपोजिटमा ब्रेक लगायो । यौनकर्मीले सुइँको पाइन् र बाइक नजिकै गइन् । केहीबेर कुरा गरे उनीहरुले । खै कतिमा कुरा मिल्यो । उनीहरु बाइकमा हुँइकिए ।
३. बार्गेनिङ चलिरहेको थियो प्रहरीको भ्यान आयो । यौनकर्मीहरुको भागाभाग भयो । केहीबेर उनीहरु बसपार्कभित्र जम्मा भए । होहल्ला समेत गरे । एकछिनमा प्रहरी भ्यान गयो । उनीहरुले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिए । प्रहरी पनि ड्युटीका लागि ड्युटी गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
कतिमा जाने ?
पाँच सयमा हुन्छ ?
अँह हुन्नँ । हजार घटेर नजानी आज त ।
सात सय मात्रै छ मसँग हुन्छ कि हुन्न भन ।
पिक आवर मानिने समयमा पनि निकै कम यौनकर्मीले मात्र ग्राहक पाए । यसको अर्थ हो अचेल रत्नपार्कमा यौनकर्मी बिक्न सकस छ ।-लोकपाटीबाट
ट्याग्स: Ratna Park